Ifulethi phantsi kwemithi ye-chestnut
Indawo ebanzi, esanda kulungiswa indawo ye-65 sqm kwindlu ephantse ibe yi-300 yendlu enesiqingatha esinesiqingatha ngokuthe ngqo kwiGartower See. Ifanitshala nezixhobo zale mihla. Ithafa phantsi kwemithi emibini emidala ye-chestnut enombono wegadi efana nepaki.
Unokulindela igumbi elikhulu lokuhlala elinendawo yekhitshi evulekileyo, igumbi lokulala eliqaqambileyo elineefestile ukuya empuma nasezantsi ukuze ukwazi ukubona ukuphuma kwelanga kusasa kunye negumbi lokuhlambela elibanzi kakhulu elineglasi. Samkela iindwendwe zethu ngeentyatyambo ezintsha, nazo ezisuka egadini yethu, ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, kunye nejam yasekhaya.
I-Gartow yindawo ezolileyo enezindlu ezininzi ezinesiqingatha, inqaba yosapho lwe-von Bernstorff kunye necawa entle. Le ndawo ineevenkile ezininzi, ivenkile yendalo, iindawo zokubhaka, abalungisi beenwele, ivenkile yebhayisekile apho unokuqesha khona iibhayisekile kunye neebhafu ezishushu zase Wendland ezinedama lokuqubha kunye nendawo yesauna. Kukho iindawo zokutyela ezininzi. Ichibi eliphambi komnyango likumema ukuba uthathe uhambo kwaye ehlotyeni uqubhe okanye uhambe ngesikhephe. Ngokuchasene nendlu yethu kukho amakhulu aliqela eminyaka ubudala alley ekhokelela ngqo kwi-Elbholz kunye ne-Elbe. Unokuyiphonononga indawo kakuhle kakhulu ngebhayisekile. Ixesha eliphakathi koSuku lokuNyukela kunye nePentekoste lithandwa kakhulu, xa abantu kuso sonke isithili bevula izindlu zabo kunye nezitiya kumagcisa avela kulo lonke elaseJamani. Ngexesha lasehlotyeni kukho imarike enkulu yeentakumba ngeeCawe rhoqo kwiiveki ezimbalwa echibini, edume kakhulu ngenxa yendawo yayo entle.
Sisoloko sifumaneka kuba sihlala nabantwana bethu kwelinye icala lendlu.